Ny momba ny kakazo sy ny lakozia rehetra
Tsy misy fanontaniana mikasika izany, ny fiavian'ny plastika dia nanova ny fanatanjahantena ny kayak mandrakizay. Ity fitaovana mahatalanjona ity dia maharitra, mora hatonina ary tsy lafo. Ireo toetra izay mahavariana ny plastika amin'ny famokarana kayaka dia mitovy ireo toetra izay manasarotra ny fanamboarana azy. Na dia tsy mora aza ny manamboatra plastika plastika, dia azo antoka fa tsy misy koa. Ity misy torolàlana iray hamaritana ny fomba hanamboarana sy ny plastika manodina ny lakanao.
Azo atao ve ny manamboatra kakazo plastika?
Maro ny fitaovana fiompiana toeram-ponenana kayak tsy te hiditra amin'ny fanamboarana plastika plastika. Matetika izy ireo dia manoro ny mpanjifany fa ny fanamboarana kayaka plastika dia tsy mendrika na tsy miasa ary fotoana mety hividianana kayak vaovao. Mazava ho azy fa manahy momba ny andraikitra izy ireo. Izy io koa dia dingana goavana izay tsy tonga amin'ny endriny tahaka ny vaovao ary tsy te-hiatrehana izany. Ary, mazava ho azy, izy ireo dia ao amin'ny orinasa fivarotana sambo, fa tsy manamboatra azy ireny.
Na dia mety ho fotoana tokony hisotroana kayaka aza ianao dia mbola tokony ho fantatrao ny safidinao. Ity lahatsoratra ity dia hanampy anao hahatakatra ny antony mahatonga ny plastika ho sarotra ny manamboatra sy manome hevitra anao momba ny fomba hanatanterahana ny fanamboarana ny plastika plastika. Bebe kokoa "
Fomba hafa hanamboarana ny plastika kayak
Tsy ny fahasimbana rehetra amin'ny kayak plastika no mitovy. Ny toerana, ny habeny, ary ny karazana lavaka, ny fehiloha, ny gouge, na ny kitroka dia singa rehetra izay milalao amin'ny fomba tokony hanamboarana ny lakanao. Ity toro-lalana ity dia hanampy anao hamantatra ny fahasimbanao sy hanome toro-hevitra momba ny fomba handehanana. Bebe kokoa "
Fantaro raha mety halefa ny kitapo plastika
Plastic Materials Welding. © George E. Sayour
Raha vantany vao fantatrao fa ny plastika ny fako plastika dia ny fametrahana ilaina ho an'ny kakazo ao an-tokantranonao, ianao dia mila mamaritra raha mety ny kakakanao manokana. Kakazo plastika dia vita amin'ny polyethylene. Na izany aza, tsy ny polyethylene rehetra ihany no afaka manamboatra. Azo atao plastika ny polyetlyene (HighPE) avo lenta (HDPE). Polyethylene voapetaka (XLPE) dia tsy afaka. Sambatra ho an'ireo kayaka ny ankamaroan'ny kayak amin'izao fotoana izao dia vita avy amin'ny HDPE, saingy mila mbola mila antoka ianao. Ity ny fomba hahafantarana raha manana kitapo HDPE ny kitapo ary azo afatotra plastika.
Fanodinana plastika plastika
Latera, mpanora-penitra, ary plastika vita amin'ny plastika mba hamitana plastika manamboatra kayak. © George E. Sayour
Ny ankamaroan'ireo manam-pahaizana dia hiteny fa mila plastika mpanamboatra plastika sy plastika plastika ianao mba hanamboarana ny kitrona ao amin'ny kayakanao. Na izany aza, raha tsy te hividy fitaovana sy fitaovana manokana ianao dia mbola manana safidy. Ny fototry ny fametahana plastika dia hafanana sy plastika ary samy afaka mahazo azy ireo ao an-tranonao. Ity misy lisitry ny fitaovana ilainao amin'ny plastika manamboatra kayaky anao amin'ny teti-bola. Bebe kokoa "
Ahoana ny fomba fandefasana plastika ny Kayak
Toerana fatoriana natao ho an'ny fanonganam-pandehanana kayak. Sary © by George E. Sayour
Vantany vao fantatrao fa afaka plastika ny kakanao ary manangona ny fitaovana ilaina ianao, vonona ny hametraka plastika ho hafanana ary hameno izany. Tsy isalasalana fa famporisihana mahery vaika ho an'ny tompona kayaka izany. Ity misy torolàlana momba ny fomba fametahana plastika ny kakakao miaraka amin'ireo fitaovana mahazatra manodidina anao. Bebe kokoa "
Tsy mora ny kitapom-pihetsika. Matetika koa isika no tia ny fitaovana ampiasaintsika. Izy roa ireo dia antony tokony hisorohana tsara ny lakozia sy ny fitaovana ampiasaintsika rehefa mivoaka ny rano. Ny Kajaks dia mampitombo ny ratra, ny fonon-tselatra ary ny plastika dia mampivelatra ny lavaka, ary ny plastika sy ny rubber dia mety maina. Izany rehetra izany dia voajanahary. Saingy tsy misy antony tokony handosirana azy ireo raha tratrany aloha. Ireto misy lisitry ny fitaovana fanamboarana izay tokony hataon'ireo kayaky rehetra mba hanamboarana sy hanamafisana ny fiainan'ny kayak sy fitaovana.
Oh Wait! Io lakana io dia kayak
Ahoana no hamehezana ny lakanao na ny lakanao any amin'ny toeram-pivoahana
Ahoana ny fametrahana kayak plastika
Rehefa any Kayak fa tsy ny Standup Paddleboard
Toeram-piantohana baobaba lehibe ao Whitewater
Lalànan'ny Lalao Olaimpika sy Torolalana
Parts of a Standing Paddleboard (SUP)
Oregon State GPA, SAT sy ACT Data
Kali: Ilay gera mainty hoditra ao amin'ny Hindoisma
7 Torohevitra ho an'ny mpianatra manentana ny saina
Torohevitra momba ny fividianana boatin-drano tsara ho an'ny fanatobiana rano
Taratasy misokatra avy amin'i Dale Thompson avy amin'ny Ampakarina Kristiana
Ahoana ny fomba hahafantarana sy hampiasana Fitsarana amin'ny teny Anglisy
Casca sy ny famonoana an'i Julius Caesar
Tetezana dihy ary inona no hovidina
Fomba folo lehibe hankalaza an'i Litha
Ny fomba fiasan-dry zareo dia ny poizina ary tsy misy zaza tsy ijerena, Janie Lou Gibbs
Ny Impostor Syndrome: Maneso anao ve ny olona rehetra?
Triumph Bonneville Long Term Test - Tatitra # 6
Jazz Tamin'ny Decade: 1950-1960
Vietnam War: Amerikana
Ireo Vehivavy Repoblikana 5 no mety hipetraka amin'ny sariitatry ny prezidansa
'Fantatro ny antony iantsoan'ny vorona caged'
Oviana no nanombohan'ny Confucianism?
Fomba hanomezana fanoloran-tena lehibe
Ny Apps ho an'ny Astronomia tsara indrindra ho an'ny smartphone, tablette ary ordinatera
Ny Agnostisma Mahery vs Agnostisma Mahakasika: Inona ny fahasamihafana?
SAT Scores amin'ny fidirana amin'ny SUNY